गोंगबु घट’नामा नयाँ ट्वी’ष्ट! कल्पनाले दिइन् प्रहरीलाई मुटु ह’ल्लाउने ब’यान , बाहिरियो घट’नाको नालीबेली, हेर्नुहोस भिडियो – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/गोंगबु घट’नामा नयाँ ट्वी’ष्ट! कल्पनाले दिइन् प्रहरीलाई मुटु ह’ल्लाउने ब’यान , बाहिरियो घट’नाको नालीबेली, हेर्नुहोस भिडियो
गोंगबु घट’नामा नयाँ ट्वी’ष्ट! कल्पनाले दिइन् प्रहरीलाई मुटु ह’ल्लाउने ब’यान , बाहिरियो घट’नाको नालीबेली, हेर्नुहोस भिडियो
काठमाडौ । काठमाडौको गोंगबुमा भएको घ’टनाका बारेमा प्रहरीले एक नयाँ तथ्य पत्ता लगाएको छ । रोल्पाका कृष्णबहादुर बोहोराको ज्यान लिएको अभियोगमा पक्रा’उ परेकी चितवनकी कल्पना मुडभरी (पौडेल) ले तन्त्र’विद्या सिक्न लागेको तथ्य प्रहरीले फे’ला पारेको छ ।
उनले कृष्णबहादुरको ज्यान लिएपछि जसरी शवलाई टु’क्रा पारेकी थिइन् त्यसवाट प्रहरी आश्चर्यमा परेको थियो । त्यस विषयमा ज्ञान भएको मानिसले मात्र त्यसरी ब्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्दै प्रहरीले घट’नाको विभिन्न पक्षको अनुसन्धान थालेको छ ।
घट’नामा अरुको पनि संल’ग्नता हुनसक्ने आशं’कामा कल्पनाको कोठामा छान’विन गर्न पुगेको प्रहरीले उ’नको कोठा’वाट त’न्त्र विद्याका केही कापी फेला पारेको छ । कल्पनाले विभिन्न त’न्त्र वि’द्या सम्बन्धि जानकारी लेखेर राख्ने गरेको प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा फे’ला पारेको जनाएको छ ।
उनले हिप्नोटाइज कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत रुची राखेको उनको कोठामा पाएको प्रमाणले देखाएको प्रहरीको भनाई छ । उनको कोठामा फे’ला परेका केही कापीमा हि’प्नोटाइज र अन्य त’न्त्रविद्याका बारेमा जान्नका लािग उनले जानकारी लेखेर राखेकी छन् । ता’न्त्रिक गुरुका कुराहरु पनि लेखेको प्रहरीले फेला पारेको छ ।
घट’ना भएको ६ दिन यता कल्पनाले आफ्नो बया’न फेर्दै गएकी छन् । उनले आफ्नो छोरीलाई पनि आँखा लगाउन थालेपछि त्यस्तो निर्णयमा पुगेको बयान दिएकी छन् । पछि फेरी अनुसन्धानका क्रममा पैसा पनि कारणका रुपमा देखिएको छ । कल्पनाले ५० लाख रुपैया लिएको कृष्णबहादुरका आफन्तहरुले दावी गरेका छन् । उनले वयानका क्रममा पनी छोरीलाई दु’ब्र्य’वहार गर्न थालेको देख्न नसकेर आफुलाई दे’बी च’ढेको पनि बताएकी छन् ।
आज थपिए ८३८ संक्रमित, कुल संक्रमितको संख्या ३०,४८३ पुग्यो
फेसबूक र ट्विटर बन्द गरिदिने ट्रम्पको ध’म्की दिएपछी, विश्वभर खै’लाबै’ला
झण्डै ४ वर्षपछि घर फर्कदा न श्रीमती न छोरी साथमा १० लाख पनि चैट, यसरी भक्कानिंदै रोए शोभराम (भिडियोसहित)